Jereo ny sokajy rehetra
Corle Fleece Mat
Torolàlana momba ny tsena
Tsenam-boninkazo artifika Yiwu
YIWU BAGS SY ZAVATRA MISY TOKONY MARINA
YIWU FUTIAN MARKET FANDROSOANA
TANTARA FAMPISORIANA YIWU
TANTARA FARANY YIWU HUANGYUAN
MARIETY YIWU JEWELRY
YIWU SCARF SY FIKAMBANANA MARKET FAMPISORANA
TAMIN’NY YIWU STATIONERY MARKET FEATURES
YIWU TOYS MARKET PRODUKSIKA
Ny tsenam-bolan'ny firavaka Yiwu dia mizara ho any an-tsenan'i Xingzhong, Plaza Alakamisy ao Jinfuyuan, City Trade International. Araho izahay hahafantatra momba ity telivarotra Jewelly telo amin'ny yiwu ity.
Raha ampitahaina amin'ny Jinfuyuan Plaza Plaza sy International Trade Ciry, tian'ny mpanjifa an'ity tsena roa ity mihoatra ny tsenan'i Xingzhong satria tsena Fandraisana amin'ny Haingo izy io ary miaraka amin'ny toe-javatra ratsy. Saingy, manintona mpividy maro ho tonga eto izy hividy ho an'ny trano taloha, mahatonga ny hofany ho mora kokoa, hitarika ny vidiny mora kokoa ho an'ny vokatra.
Jinfuyuan Jewelry Plaza dia tsena vaovao raha oharina amin'ireo tsena 2 hafa, naorina 2 taona lasa izay, misy boara 300 eo ho eo, kely kokoa noho ny Yiwu International Trade City. Fa ity tsena ity koa dia safidy tsara, satria eto dia tsara tokoa ny serivisy, tsy be olona na be antitra toy ny tsenan'i Xingzhong, na dia tsy dia lehibe loatra ny haben'ny tsena.
Ny tsenan'ny firavaka amin'ny firavaka dia misy amin'ny ambaratonga fahatelo amin'ny International Trade City disstrict1, faritra E. Ity ny tsenam-barotra firavaka azafady lehibe izay misy trano maherin'ny 800, amidy ny kojakoja isan-karazany, dia afaka manadihady ireo entana hafa mitovy ihany ny olona rehefa mividy ny kojakoja firavaka izy ireo. Ity koa no antony mahatonga ny lehilahy mpivarotra teratany vahiny toa ity tsena ity.
© Copyright - 2020-2021: Zo rehetra voatokana.